MyCoolClass | जहाँबाट जे पनि सिक्नुहोस्
एक लगानीकर्ता बन्नुहोस्
नयाँ विद्यार्थी दर्ता
शिक्षक हुन आवेदन दिनुहोस्
अनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म
नि: शुल्क डेमो बुक गर्नुहोस्
तपाईं आज के जान्न चाहानुहुन्छ?
यात्रा र संस्कृति
रमाईलो गर्नुहोस् र सिक्नुहोस्!
निजीकृत एक-एक पाठ र आकर्षक समूह पाठ्यक्रम मात्र बच्चाहरु को लागी!
निजी एक मा एक पाठ वा तपाइँको बच्चा को आवश्यकताहरु अनुरूप रोमाञ्चक समूह पाठ्यक्रम संग सही शिक्षक पाउनुहोस्। हाम्रा शिक्षकहरु बुझ्छन् कि कसरी बच्चाहरु जान्छन् र प्रोप, कठपुतली, र खेल को एक किसिम को उपयोग गरेर आकर्षक पाठ प्रदान गर्दछ।
चाहे यो बलियो भाषा कौशल निर्माण, एक उपकरण सिक्न,
वा कला सिर्जना, MyCoolClass आफ्नो बच्चा एक सफल भविष्य को लागी आवश्यक कौशल को विकास मा मद्दत गर्नेछ.
धेरै राम्रो हुनुको अलावा, हाम्रा सबै शिक्षकहरु छन् व्यावसायिक शिक्षकहरु र विशेषज्ञहरु बच्चाहरुलाई पढाउने क्रममा।
निजी एक-एक-एक पाठ आत्मविश्वास बढाउन र भाषा कौशल सुधार गर्न अनुरूप लिनुहोस्। हाम्रा शिक्षकहरु ज्ञान, अनुभव, र उपकरणहरु तपाइँको बच्चा खेल, प्रोप, र अधिक को एक किसिम को उपयोग मा संलग्न राख्न को लागी छन्।
के तपाइँको बच्चालाई कला, नृत्य, संगीत, विज्ञान, वा पढ्न मन पर्छ? हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाइँ सही पाठ्यक्रम पाउन सक्नुहुन्छ। विषय र बिषयहरु को एक किसिम मा हाम्रो अद्वितीय कक्षाहरु को जाँच, दुनिया भर मा नयाँ साथीहरु संग सिक्ने!
अन्य सिकाउने प्लेटफर्महरु को विपरीत, हाम्रा सबै शिक्षकहरु सामूहिक रूप मा MyCoolClass संगठन को मालिक।
एक कामदार-सहकारी को रूप मा, हाम्रो व्यापार मोडेल मापदण्ड को उच्चतम पूरा जो विश्व भर बाट सबै भन्दा राम्रो शिक्षकहरु लाई आकर्षित गर्दछ।
एक मालिक जस्तै कुरा गर्नुहोस्
राम्रो अंग्रेजी को लागी
अंग्रेजीले ढोका खोल्छ र बजारहरु!
सामना गरौ। अंग्रेजी व्यापार को अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो।
चाहे तपाइँ एक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी को लागी काम गर्नुहुन्छ, तपाइँको बजार लाई विविधता दिन चाहानुहुन्छ,
वा विदेश सार्नुहोस्, एक विश्वस्त अंग्रेजी वक्ता हुनुले तपाइँलाई एक फायदा दिन्छ।
MyCoolClass सबैभन्दा योग्य र अनुभवी प्रशिक्षकहरु सुविधाहरु
व्यापार अंग्रेजी मा विशेषज्ञता जो दुनिया भर बाट।
सबै शिक्षकहरु प्रमाणित पेशेवरहरु हुन् र निजीकृत पाठहरु प्रदान गर्दछन्
र आकर्षक पाठ्यक्रमहरु तपाइँको सुधार को ग्यारेन्टी संचार कौशल र निर्माण निर्धक्क।
के तपाइँ एक उद्योग मा काम गर्नुहुन्छ जस्तै आतिथ्य वा बिक्री र मार्केटि and र अंग्रेजी मा कुराकानी गर्न को लागी आवश्यक छ? हाम्रो अनुभवी बिजनेस अंग्रेजी शिक्षकहरु तपाइँ एक प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण मा पलाउन मद्दत गर्नेछ।
अंग्रेजी प्रवीणता को प्रमाण एक बलियो लाभ हो र कहिलेकाहीँ विश्वविद्यालयहरु र नियोक्ताहरु द्वारा आवश्यक छ। MyCoolClass शिक्षकहरु जो IELTS, TOEFL, क्याम्ब्रिज परीक्षा, र अधिक को लागी prepping मा विशेषज्ञता छ।
चाहे तपाइँ बार्सिलोना, पेरिस, वा लस एन्जलस जाँदै हुनुहुन्छ, स्थानीय भाषा सिक्न जीवन सजिलो बनाउनेछ। MyCoolClass 15 भन्दा बढी भाषाहरु मा शिक्षकहरु तपाइँ एक नयाँ देश मा फस्टाउन को लागी आवश्यक कौशल को विकास मा मद्दत गर्न को लागी छ।
पुस्तक ए नि: शुल्क प्रदर्शन आज!
एक खोज्नुहोस् शिक्षक
हामी तपाइँ बाट छनौट गर्न को लागी धेरै योग्य शिक्षकहरु छन्। प्रोफाईल र भिडियो एक शिक्षक को लागी तपाइँलाई उत्तम सूट खोज्न को लागी हेर्नुहोस्।
तपाइँको बुक गर्नुहोस् क्लास
जान्नुहोस् जब तपाइँ चाहानुहुन्छ। किताब
एक दिन र समय तपाइँको तालिका फिट गर्न को लागी।
बस कक्षा मा प्रवेश गर्नुहोस् र तपाइँको सिक्ने साहसिक कार्य शुरू गरौं!
१००% प्रमाणित पेशेवर शिक्षकहरु
MyCoolClass मात्र विश्व भर बाट सबैभन्दा योग्य शिक्षकहरु लाई स्वीकार गर्दछ। सबै शिक्षकहरु हाम्रो टीम द्वारा आयोजित एक 4-चरण प्रमाणिकरण प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ। शिक्षकहरु प्लेटफर्म मा पढाउनु अघि एक आपराधिक पृष्ठभूमि जाँच गर्न सहमत हुनुपर्छ। हामी ग्यारेन्टी गर्छौं कि हाम्रा सबै शिक्षकहरु मापदण्ड को उच्चतम पूरा।
MyCoolClass चलिरहेको व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण प्रदान गर्न को लागी हाम्रो शिक्षकहरु लाई सबै भन्दा राम्रो हुन सक्छ।
ब्रान्डबुक र लोगो
नियम र नीतिहरू
© २०२१ MyCoolClass सहकारी लिमिटेड | सबै अधिकार सुरक्षित।
सहकारी र सामुदायिक लाभ समाज ऐन २०१ under अन्तर्गत एक पंजीकृत समाजको रूपमा युनाइटेड किंगडममा पंजीकृत। रेग नम्बर 2014 4790 XNUMX ०
एलाला द्वारा डिजाइन
हामी के गर्दैछौं जस्तो?
हाम्रो मेलिङ सूचीमा सामेल हुनुहोस् र नवीनतम समाचार, सिक्ने सुझावहरू, र सामयिक प्रचारहरू जारी राख्नुहोस्। तपाईं कुनै पनि समयमा सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। गोपनीयता नीति
इमेल आफ्नो इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्
यो वेबसाइट कुकीहरु को उपयोग गर्दछ
हामी हाम्रो वेबसाइट मा कुकीहरु को उपयोग तपाइँ तपाइँको प्राथमिकताहरु लाई याद गरेर र दोहोर्याउने भ्रमणहरु लाई सबैभन्दा सान्दर्भिक अनुभव दिन को लागी। "सबै स्वीकार गर्नुहोस्" मा क्लिक गरेर, तपाइँ सबै कुकीहरु को उपयोग को लागी सहमत हुनुहुन्छ। थप पढ्नुहोस्कुकी सेटिङहरूसबै स्वीकार्नुहोस्
एउटा डाटा डाटाको एक सानो टुक्रा हो (पाठ फाइल) जुन वेबसाइट - प्रयोगकर्ता द्वारा भ्रमण गरेको बेला - तपाइँको ब्राउजरलाई तपाइँको बारेमा जानकारी सम्झनको लागि तपाइँको उपकरणमा भण्डारण गर्न लगाउँदछ, जस्तै तपाइँको भाषा प्राथमिकता वा लगइन जानकारी। ती कुकिजहरू हामी द्वारा सेट र पहिलो-पार्टी कुकीहरू भनिन्छ। हामी तेस्रो-पक्ष कुकिज पनि प्रयोग गर्छौं - जुन तपाइँको वेबसाइटको भ्रमण गरिएको डोमेनको डोमेन भन्दा कुकीज हुन् - हाम्रो विज्ञापन र मार्केटिंग प्रयासहरूको लागि।
हामी कुकीहरूको धेरै कारणका लागि प्रयोग गर्छौं
MyCoolClass वेबसाइटको आवश्यक कम्पोनेन्टहरू अपरेट गर्न,
MyCoolClass प्रयोगको साथ तपाईंको अनुभव बृद्धि गर्न,
व्यक्तिले वेबसाइट कसरी प्रयोग गर्दछ भन्ने राम्रोसँग बुझ्नको लागि। यसले तेस्रो पक्ष सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरूको कुकीहरू समावेश गर्न सक्दछ।
सर्तहरू र। का साथ तपाइँले यस कुकिज नीति पढ्नुपर्नेछ गोपनीयता नीति.
"तपाइँको कुकीहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्" सेक्सनमा पृष्ठको तलको निर्देशनहरू पालना गरेर तपाइँ कुनै पनि समय आफ्नो कुकी सेटि changeहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
कुकीहरू केका लागि हुन्?
हामी निम्न उद्देश्यका लागि कुकीहरू र अन्य ट्र्याकि technologies टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछौं।
कसरी पर्यटकहरू विश्लेषण गर्न, तपाईं हाम्रो वेबसाइट
कक्षा र कोर्सको लोकप्रियता एनालिसी गर्न
हाम्रो वेबसाइटमा फंक्शनल र सामग्री बृद्धि गर्न हामीलाई मद्दत गर्न
तपाईको कुकी प्राथमिकता प्रबन्धन गर्दै
तपाइँ तपाइँको कुकी प्राथमिकताहरू MyCoolClass वेबसाइटमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँ तपाइँको वेब ब्राउजर सेटिंग्स मार्फत कुकीहरू नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ। धेरै जसो वेब ब्राउजरहरूले प्राय जसो कुकीहरूको नियन्त्रण गर्न दिन्छ। कुकिजको बारेमा बढि जान्नको लागि, कसरी कुकीहरू सेट गरिएको छ भनेर कसरी हेर्नुहोस्, www.aboutcookies.org वा www.allaboutcookies.org मा जानुहोस्।
लोकप्रिय ब्राउजरहरूमा कुकीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे फेला पार्नुहोस्:
अन्य ब्राउजरसँग सम्बन्धित जानकारी फेला पार्न ब्राउजर विकासकर्ताको वेबसाइटमा जानुहोस्।
सबै वेबसाइटहरूमा गुगल एनालाइटिक्स द्वारा ट्र्याक गरिएको अप्ट आउट गर्न, भ्रमण गर्नुहोस् http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
sp_landing 1 दिन sp_landing वेबसाइटमा Spotify बाट अडियो सामग्री लागू गर्न Spotify द्वारा सेट गरिएको छ र अडियो सामग्रीसँग सम्बन्धित प्रयोगकर्ता अन्तरक्रियामा जानकारी दर्ता गर्दछ।
sp_t 1 वर्ष sp_t कुकी Spotify द्वारा वेबसाइटमा Spotify बाट अडियो सामग्री लागू गर्न सेट गरिएको छ र अडियो सामग्रीसँग सम्बन्धित प्रयोगकर्ता अन्तरक्रियामा जानकारी दर्ता गर्दछ।
_gat 1 मिनेट यो कुकी गुगल युनिभर्सल एनालिटिक्स द्वारा अनुरोध दर को रोकथाम र यस प्रकार उच्च यातायात साइटहरु मा डाटा को संग्रह सीमित गर्न को लागी स्थापित छ।
VISITOR_INFO1_LIVE5महिना 27 दिन एक कुकी यूट्यूब द्वारा ब्यान्डविड्थ मापन गर्न को लागी सेट गरीन्छ कि प्रयोगकर्ता नयाँ वा पुरानो प्लेयर ईन्टरफेस प्राप्त गर्दछ।
YSC सत्र YSC कुकी यूट्यूब द्वारा सेट गरीएको छ र यूट्यूब पृष्ठहरुमा एम्बेडेड भिडियो को दृश्य ट्रयाक गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ।
yt- रिमोट-जडित उपकरणहरू कहिल्यै YouTube ले इम्बेडेड YouTube भिडियो प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताको भिडियो प्राथमिकताहरू भण्डारण गर्न यो कुकी सेट गर्दछ।
yt- रिमोट-उपकरण आईडी कहिल्यै YouTube ले इम्बेडेड YouTube भिडियो प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताको भिडियो प्राथमिकताहरू भण्डारण गर्न यो कुकी सेट गर्दछ।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-कार्यात्मक 1 वर्ष कुकी GDPR कुकी सहमति द्वारा सेट गरिएको छ "फंक्शनल" कोटिमा कुकिजका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति रेकर्ड गर्न।
लग स्तर कहिल्यै कुनै विवरण उपलब्ध छैन।